:: My Little World ::: April 2009
အဆူအပူခံကာ မှီခိုရာဌာန အိမ်ဆိုပေမယ့် အိမ်ရယ်မမည်တော့ဘူး။
ငွေရယ်ဆိုလို့၁၀ တန်နဲ့အကြွေတချို့ ...
မျက်ရည်ကျပြီးလိုက်ခေါ်သူရယ်မရှိ.. သေလိုက သေနိုင်၏.. ရှင်လိုက ရှင်နိုင်၏
ကိုယ်ယောက်ျားမို့ကိုယ်သဌေးဖြစ် ခွေးဖြစ်ပါပဲ..
ဒီလိုနဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာ ငတ်ခြင်းနဲ့ ပြေးတမ်းလိုက်တမ်း.
လူဆိုတာဟာတော်ယုံနဲ့ သေခဲ.. ကြာလာတော့လည်း ခံနိုင်ရည်နဲ့ ဝ
အပျံသင်စ တဖြစ်လဲတဲ့အခါ .. ကိုယ်ပလက်ဖောင်းမင်းသား အရင့်စား..
ရေဆိုတာဟာ နွေခါမှာ ခက်သေး.. ငွေဆိုတာဟာ ရှာနိုင်သူ ဖို့ မရှား..
သိပ်မတွေးနဲ့သိပ်မမေးနဲ့ ..
အရလွယ်တိုင်းလည်း တွေ့ တာအကုန်မယူနဲ့ 
ကြာကြာဝါးမယ့်သွား ဘာစားစား အရိုးကြည့်ရှောင်ဟေ့..
ဖော်မစုံသူသောက်တဲ့ အလင်းဆိုင်.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အခုခေတ်ပေါ်သီချင်း..
ဖီလင်ဆိုတာဒါရယ်ကိုခေါ်သလား.. ဘာရယ်ညာရယ် ကိုယ်လေမသိပဲဆွေး...
အချိန်တန်တော့ ဘ၀ပေးကုသိုလ်.. ကိုယ်လည်းပဲ အတွဲကလေးနဲ့ မိ
မဒီကိန္နရီ စံချိန်မမှီပေမယ့် ... ဟာနေတာကို မဟာရုံသူဖြည့်ပေး..
ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးရူးချင်တယ်ဆိုလည်း ကပ်လက်စနဲ့ ကပ်ဦးပေါ့
ထရံထက်မှာ ရွှေမင်းသမီးဇာတ်ကား ကြော်ငြာ
လူဆိုတာ အချစ် (အကျင့်) ရဲ့ကျေးကျွန်.. ထီထိုးရင်းတိုက်ဖို့ မေ့ရင်း..
ဒီအခြေအနေကိုပျော်တယ်လို့ မယူဆရင်... ပျော်တယ်ဆိုတာဘာလဲ ကိုယ်မသိတော့
နာမည်ကျော် ငွေရှိတဲ့ဘ၀ဟာ .. အိပ်မက်နဲ့ ပဲ ကျိန်းကျေတတ်..
ဒီအရွယ်မှာပါ ကိုယ်ဟာဘာကောင်လဲ မသိရင်.. ကိုယ်ထင်တာထက်ကိုယ်ဟာပိုအ, ပေါ့
ကြိုက်တာရမယ့် သူ့ တန်ရာတန်ကြေး
Brother ရေ ဇေပါတယ်.. ငွေသာအရင် မစပါ..
နောက်ဆုံးနေ့ အထိ... ကိုယ်ပလက်ဖောင်းမင်းသားအရင့်စား
Posted by Nay Nay Naing at 4/29/2009 05:11:00 AM 8 comments
ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး ဒီနေ့ဝမ်းကွဲ မောင်တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်ရင်း ဖေဖေ နဲ့မေမေကို သူခေါ်တဲ့ နာမည်ကို သတိထားမိလိုက်လို့စိတ်ထဲပေါ်လာတာလေးတွေ ချရေးလိုက်တယ်။
လေးလေး နဲ့လေးနိုင်
ဦးဒေါ နဲ့အန်တီမူး
အဖေနဲ့အမေကို ကျွန်မရဲ့ ၀မ်းကွဲ မောင်နှမတွေ ခေါ်တဲ့ နာမည်တွေ။ လေးလေး နဲ့ လေးနိုင်ဆိုတာ ဆွေမျိုးစပ်ရင် အမေ့ဘက်က တော်တဲ့ သူတွေ ခေါ်တာ။ ဦးဒေါ နဲ့အန်တီမူး ကတော့ အဖေ့ဘက်က ဆွေမျိုးတွေ ခေါ်တာပါ။ အိမ်မှာဧည့်သည်လာလို့ဒါအမျိုး ဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးရင် ဘယ်သူ့ဘက်ကလည်း ဆိုတာ မေးစရာမလိုဘူး၊ သူတို့ခေါ်ပုံခေါ်နည်း ကြည့်ပြီး ဘယ်ဘက်က တော်တဲ့ အမျိုးလည်းဆိုတာ ခွဲခြားသိနိုင်တယ်။
မေမေ့ကို သူရဲ့ တူတွေ တူမတွေက လေးလေး လို့ ခေါ်ကြတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အဒေါ်ကို ဒီလိုခေါ်တာ မကြားဖူးတော့ စပြီး ကြားခါစက ထူးဆန်းနေခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ဘာလို့မေမေ့ကို လေးလေးလို့ ခေါ်တာ လဲဆို မေးခဲ့ဖူးတယ်။ မေမေတို့ဒေသမှာ အဒေါ်ကို လေးလေးလို့ခေါ်လေ့ရှိတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်လို့မှတ်မိနေပါတယ်။ ဦလေးကိုရော အဲဒီလို ခေါ်သလား သေချာ မသိတော့ဘူး။ နောက်မှ မေမေ့ကို မေးကြည့်ပါအုံးမယ်။ ဒါပေမယ့် မေမေက လေးလေး ဖြစ်လို့ဖေဖေကို လေးနိုင် လို့ ခေါ်တာတော့ သေချာတယ်။ အဖေ ဘက်က အမျိုးတွေက ခေါ်တာက ပိုရှင်းသလိုပဲ။ ဖေဖေ့ ငယ်နာမည် နဲ့မေမေ ငယ်နာမည်ကို ဦး နဲ့အန်တီ ရှေ့ တပ်ခေါ်တာ။ ဒါတောင် သိပ်မကျေနပ် ချင်ဘူး။ ဘာလို့အန်တီနဲ့အန်ကယ် မဖြစ်ရတာလဲဆို မေးခဲ့ဘူးသေးတယ်။ အဖေ့ ငယ်နာမည်က ဘိုဆန်ဆန် အင်္ဂလိပ်လို၊ အမေ့ငယ် နာမည်က ခပ်ရိုးရိုး မြန်မာလို။ အင်္ဂလိပ်လိုကို ဦးတပ်ခေါ်ပြီး၊ မြန်မာလိုကို အန်တီတပ် ခေါ်တယ်။ ဒါကို စိတ်ထဲခိုးလို့ ခုလုမို ဘာလို့အဲလိုဖြစ်နေတာလဲဆို ပြောဖူးတယ်။
ကျွန်မ ငယ်ငယ်က အဖေ့ကို သူ့ အမျိုးတွေ ခေါ်တဲ့ နာမည်ကို စပြီး သတိထားမိတဲ့ အချိန်မှာ အဖေက ဒေါသကြီးလို့အဲလို ခေါ်တာလား မေးခဲ့ ဖူးတယ်။ အမေ့ နာမည်ကြားတုန်းကလည်း မေမေက မူးတတ်လို့ လားလို့အဲလို ခေါ်ကြတာလား ဆိုပြီးလည်း မေးခဲ့ဖူး ပြန်တယ်။ ငယ်နာမည်တွေမှာ ဘာကြောင့် အဲဒီလိုလေးတွေ ခေါ်ရတယ်ဆိုတဲ့ ရာဇ၀င်လေးတွေ ရှိတတ်တယ်လေ။ ဒါလဲ မေးကြည့်ဖူးတာပဲ။ အမေနာမည် ငယ်နာမည်ပေးတာကတော့ ရှင်းတယ်။ မြစ်တစ်စင်းရဲ့ အမည်။ အဖေ့ ငယ်နာမည်က မြန်မာ အင်္ဂလိပ်လို့၂ မျိုးယူလို့ ရတယ်တဲ့။ အဖွားက အင်္ဂလိပ်လို အဓိပ္ပါယ်နဲ့ခေါ်ပြီး၊ အဖိုးက မြန်မာလို အဓိပ္ပါယ် နဲ့ခေါ်တယ် လို့အဖွား ပြောဖူးသလိုပဲ။ ဟုတ်မဟုတ်ကို အဖွားကို ပြန်မေးလို့မရတော့ဘူး။ အဖေ့ဘက်က အဖေဘက်က အဖိုး နဲ့အဖွားတွေ (အဖေရဲ့ အမေ အဖွားနဲ့အဖိုး ရဲ့ ညီမ အဖွားလေး) အားလုံး တခြားဘ၀ ပြောင်းသွားတာ အတော် ကြာခဲ့ပြီ။
တခြား မောင်နှမတွေ အဲ့လို မေးခွန်းတွေ မေးမမေးတော့ မသိဘူး။ ကျွန်မကတော့ ငယ်ငယ်က အတော်လေး အမေးအမြန်းထူ တယ်။ ခုထိလည်း မသိရင်၊ သိချင်တာရှိရင် မေးခွန်းထုတ်တုန်းပါပဲ။ ခုတွေးမိတာလေးတွေ ရေးရင်းမှ ကျွန်မ မေးသမျှ လူကြီးတွေက အတော်လေး စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြခဲ့တာပဲလို့သတိထား မိလိုက်တယ်။ တစ်ချို့ မေးခွန်းတွေ နဲ့အဖြေတွေကို ပြန်မှတ်မိပါသေးတယ်။ ဆက်တွေးရင်း ကျွန်မ သာ သူတို့ နေရာမှာဆို ကလေးတွေကို အဲဒီလောက် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ရှင်းပြနိုင်ပါ့မလားဆို သံသယတောင် ဖြစ်မိလာတယ်။ ကိုယ်က နဂိုကတည်းက သိပ်ပြီး စိတ်ရှည်တတ်တဲ့လူမျိုး မဟုတ်ဘူးလေ။
Posted by Nay Nay Naing at 4/24/2009 02:59:00 PM3comments
အိပ်လက်စနဲ့အိပ်ဦး...
အခုတော့ အိပ်ဦး... အချစ်ဆုံး...
ခုရက်ပိုင်း နားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းတွေထဲက အထက်မှာ ရေးထားတဲ့ စာသားတွေကို အရမ်းကို သဘောကျနေမိပါတယ်.. ချော့သိပ်နေသလိုပဲ။ စိတ်ပင်ပန်း လူပင်ပန်း ဖြစ်နေတာတွေကိုလည်း ပျောက်သွားစေတယ်။ အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေရင် ဒီသီချင်းလေး နားထောင်လိုက် အိပ်လို့ ရသွားတယ်။ ဒီသီချင်းကို အရင်ကတည်းက ကြိုက်ပြီးသားပါ။ တခြားစာသားတွေလည်း ကောင်းတယ်။ ဆိုတာလည်း ကြိုက်တယ်။ တကယ်ဆို စိုင်းထီးဆိုင် ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်း အတော်များများ၊ စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတဲ့ သီချင်းစာသားတွေကို ကြိုက်တယ်ဆိုတာ အထူးထပ်ပြောဖို့ တောင် လိုမယ် မထင်ဘူး။
အိပ်မက်တွေထဲက ဘ၀မျိုး ဖန်ဆင်းဖို့ 
ကြင်နာသူ ကိုယ်တယောက် ကြိုးစားဆဲမှာ
ဒုက္ခဆိုတာ အကြွေးထားလို့ ရယင်
ဒီဘ၀ မင်းနဲ့ အတူတူ ပျော်ပြီး နောက်ဘ၀ကျမှ
ဘေးဖယ်ထားပါဦး တနေ့ နေ့ ကျယင်
ကိုယ်ဘာမှ မရှင်းပြပဲ နားလည်လို့ လာမယ်
အချစ်ဟာ အချစ်ရဲ့ သက်သေပဲ
အနမ်းနဲ့ကိုယ်အနှိုးမှာ..
အိပ်မက်နဲ့တို့ ဘ၀ တူညီနေတာကို .. မင်းတွေ့ ရမယ်.
Posted by Nay Nay Naing at 4/23/2009 10:12:00 AM5comments
ဖတ်မိတာလေး သဘောကျလို့ ...
We sometimes get so caught up in issues and we try to do more than we can. And, we sometimes do more negative things than we do positive!
ကဗျာဖတ်ပြီး သဘောကျလို့ပိုစ့်တင်ပြီးမှ DO LESS ဆိုတာကို ကြည့်ရင်း ကြည့်ရင်း ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ကုန်ပိုင်းက စလို့အခု အချိန်အထိ အလုပ်က Conference တွေ၊ Meeting တွေတိုင်းမှာ အမြဲ ကြားနေရတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကို သတိရသွားတယ်။ အလုပ်မှာ ဖြုတ်တော့ မဖြုတ်သေးဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူထွက်ထွက်၊ အဲဒီ ထွက်သွားတဲ့ လူတွေရဲ့ နေရာတွေမှာ အစားထိုးပြန်ခန့် တာမျိုး မရှိတော့ဘူးလို့ပြောထားတာ ကြာပြီ။ တကယ်လည်း ထပ်မခန့် ဘူး။ ဒီတော့ လူနည်းသွားတယ်၊ ဒါပေမယ့် အလုပ်တွေကတော့ နည်းမသွားဘူး။ အလုပ်တွေပြီးဖို့ ဆို ကျန်တဲ့သူတွေက အရင်ထက် ပိုပြီး အလုပ်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့လူအမျိုးမျိုးက အချိန်အမျိုးမျိုး နေရာအမျိုးမျိုးမှာ စကားပြောဖို့အခွင့်အရေးကြုံလိုက်တာနဲ့ ဒီစကားကိုပဲ ထပ်တလဲလဲ ပြောနေကြတော့တာပါပဲ။
Labels: Poem, Quotation
Posted by Nay Nay Naing at 4/22/2009 04:22:00 PM3comments
Oracle က Sun Microsystems ကို ၇.၄ ဘီလီယံ နဲ့ဝယ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု့ ရရှိသွားတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း အခုပဲ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဒီသတင်းဖတ်ပြီး အံ့သြသွားတယ်။ ထင်မထားတာတွေ ဖြစ်လာလို့ မဟုတ်ဘူး၊ ထင်ထားတာတွေ ဖြစ်လာလို့ ပါ။
ဟိုတလော IBM က Sun ကို ၀ယ်ဖို့ကြိုးစားတယ် ဖတ်ရတုန်းက တစ်ယောက်နဲ့အဲဒီကိစ္စ ဘယ်လို ထင်လဲ ပြောဖြစ်တယ်။ Oracle က Sun ကို IBM လက်ထဲ ပါခံမယ် မထင်ဘူး၊ ၀င်လာနိုင်တယ် လို့ ပြောတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို Oracle ရဲ့ Product တွေ အများစုက Sun Java အပေါ် အတော်လေးကို မှီနေတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် IBM က Sun ကို ၀ယ်ထာတက်စာရင် Oracle က Sun ကို ၀ယ်တာတော်သေးတယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ Oracle Sun က ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ကတင် MySQL ကိုလည်း ၀ယ်ထားတယ်၊ အခု Oracle က Sun ကို လည်း ၀ယ်လိုက်ပြီ။ Opensource တွေဘက်ကကြည့်ရင်တော့ မကောင်းဘူး။
အခု အနေအထားအရဆို Oracle က Microsoft ပြီးရင် အကြီးဆုံးလို့ တောင် ပြောလို့ ရပြီ။ Oracle က MySQL ကို ရသွားတာကိုတော့ အတော်လေး သဘောမကျဘူး။ တကယ်ဆို RedHat ကသာ MySQL ကို ၀ယ်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆို ပွဲက ပိုကြည့်ကောင်းမယ်။
တွေးမိတာတွေ ဆက်ရေးမယ်ဆို အိပ်ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ တော်ပြီ အိပ်ပြီ။
Sun acquires MySQL !!!
အမှားပြင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကို P.Ti
Posted by Nay Nay Naing at 4/21/2009 01:52:00 AM5comments
They shorten the miles between the souls.
Photo Credit to Rainstealer
Labels: Day, Quotation
Posted by Nay Nay Naing at 4/20/2009 11:40:00 AM2comments
Collection of 2009 Thingyan Photos
ဒီနေ့သင်္ကြန် အတက်နေ။ အတာ သင်္ကြန်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ ဆိုတော့ သင်္ကြန်ပွဲကို ဆင်နွဲ ခွင့်ရတဲ့သူတွေ အစွမ်းကုန် ပျော်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေ လောက်ပြီ။ ဒီနှစ် သင်္ကြန် ပုံတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ သိပ်မတွေ့ ဘူး။ ကိုယ်ပဲ မတွေ့ တာလား၊ အင်တာနက် နှေးနေလို့ပုံတွေ တက်မလာတာလားတော့ မသိဘူး။သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့ ရင် ပြောပါလို့တောင်းဆိုသူများ အတွက်။ စုံချင်မှ စုံမယ်၊ ကျွန်မ တွေ့ မိသလောက် နေရာတွေကို စုထားတာပါ။
[Home] HtooTayZar ဘလော့မှ သင်္ကြန် အကြောင်းပိုစ့်များ နှင့် ဓာတ်ပုံများ
[Home] NyiMinSan ဘလော့မှ သင်္ကြန် အကြောင်းပိုစ့်များ နှင့် ဓာတ်ပုံများ
3rd Day of Mdy Thingyan
2nd Day of Mdy Thingyan
1st Day of Mdy Thingyan
[Home] MgHla ဘလော့မှ သင်္ကြန် အကြောင်းပိုစ့်များ နှင့် ဓာတ်ပုံများ
Mandalay Thingyan 14 Apr 2009
Mandalay Thingyan 15-Apr-2009
[Home] NineNineSaNay ဘလော့မှ သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံများ
အဲဒီ သင်္ကြန်ဖက်ရှင်က ပုံတွေကိုကြည့်၊ တခြားသူတွေတင်ထားတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲက လူပုံတွေကိုကြည့်ပြီး သဘောကျနေမိတယ်။
Thangyan Photos from Forums
ThinGyan 2009 - NativeMyanmar
ThinGyan 2009 - MMCupid
ThinGyan 2009 - YAMC.info
တခြား ပုံနည်းနည်း စီတင်ထားတဲ့ ဘလော့တွေလည်း တွေ့ မိတယ်။
ဒီအောက်မှာတော့ နေးတစ် ၂၀၀၉ သင်္ကြန် တော့ပစ် မှာ 3dCrazy ဆိုတဲ့ မန်ဘာ တင်ပေးတဲ့ ပုံတွေထဲက ၂ ပုံကို သဘောကျလို့ပြန်လည် ဖော်ပြတာပါ။ တစ်ယောက်ချင်းတွေကို ရိုက်ထားတာထက်စာရင် ဒါမျိုးကြည့်ရတော့ သင်္ကြန်ပွဲကြီး ဘယ်လောက်တောင် စည်ကားနေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ပိုပြီး သဘောကျတယ်။ တခြားပုံတွေပါ ကြည့်ချင်တယ်ဆို နေးတစ်မှာသာ သွားကြည့်လိုက် ပါတယ်။ တခြားမန်ဘာတွေလည်း သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံတွေ တင်ပေးနေတာ တွေ့ ရတယ်။
တံတားဖြူမီးပွိုင့်ကနေ အင်းယားလမ်းထဲကို လှမ်းရိုက်ထားခြင်း
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းသစ်ထဲကို လှည်းတန်းမီးပွိုင့်မှ ရိုက်ထားခြင်း
ခုတော့ ဒီလောက်ပဲ။ နောက်ထပ် ဓာတ်ပုံတွေ Links အသစ်တွေ တွေ့ ရင် Update လုပ်ပါအုံးမယ်။ တခြား သိတာများ ရှိရင်လည်း သတင်းပေးပါအုံး။ Links တွေ ပို့ ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ နဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို မျှဝေသူများ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း....
Other Related Post: Collection of 2008 Thingyan Photos
Posted by Nay Nay Naing at 4/16/2009 11:40:00 AM7comments
ရွှေဝတ်ဆံ ငုံတံ ညှောက်ကယ်နှင့်
ခါသင်္ကြန် ဂိမှာန် ရောက်ပြန်တော့
သိရ်သရေ ထိန်ဝေလို့ တောက်တဲ့ပြင်
ပန်းပိတောက်မင်း … ။ … ။
ခမျာမှာ တဂုဏ်ဆန်းရတယ် …
ပန်းပိတောက်များ … ။ … ။
မဟန တင်ထားတဲ့ ပိတောက်ပန်းပုံတွေ၊ ကိုဖြိုး ရဲ့ ပိတောက်ပန်းပုံတွေကို ကြည့်ပြီး လတန်ခူးပေမို့အစချီတဲ့ ပိတောက်ပန်း ကဗျာလေးကို သတိရသွားတယ်။ အဲဒီကဗျာလေးက ကျောင်းတုန်းက သင်ခဲ့ရတာဆိုတော့ ကဗျာတစ်ခုလုံးကို အလွတ်ဆိုလို့ ရပေမယ့် တစ်ချို့ စကားလုံးတွေ မှားသွားမှာ စိုးတာကြောင့် ဂူးဂဲလ်လုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ အခါ မမေဓာဝီ တင်ထားတဲ့ ကဗျာလေးတွေကို သွားတွေ့ တယ်။ ဇော်ဂျီ ရေးတဲ့ ပိတောက်ပန်း ကဗျာထဲက စာသားတစ်ချို့ ကို သိပေမယ့် အဲဒီကဗျာကိုတော့ အလွတ် မရဘူး။ ကဗျာတွေရော၊ ပန်းတွေရော သဘောကျတာနဲ့မှတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ပုံထဲက ပိတောက်ပန်းတွေက မြန်မာပြည်မှာ ပွင့်တဲ့ ပိတောက်ပန်းတွေတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နေရာမှာပွင့်တဲ့ ပိတောက်ပန်း ဖြစ်ပါစေ... ပိတောက်ပန်း ဆိုတာနဲ့ပိတောက်ပန်း မြင်တာနဲ့ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုပဲ သတိရမိပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 4/16/2009 10:05:00 AM3comments
တုံယမ်းဟင်း ၁ ပွဲ ၊ ယိုးဒယား ငပိထောင်း ၁ ပွဲ ၊ သဘောင်္သီးထောင်း ၂ ပွဲ၊ ဖားအကျွတ်ကြော် ၂ ပွဲ၊ ကြက်အရေခွံကြော် ၃ ပွဲ (၄ ပွဲ) ၊ အသားသုတ် ၁ပွဲ ( ၀က်သား ထင်တယ်)၊ အရွက်ကြော် ၁ ပွဲ (ကန်စွန်းရွက်)
လဆန်းပိုင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့Golden Mile မှာ ထိုင်းအစားအသောက်ကို ညစာအဖြစ် သွားစားတုန်း ရိုက်ထားတဲ့ပုံ။ စားနေကြ ဆိုင်။ မြန်မာ စာပွဲထိုးတွေရှိလို့မြန်မာလို မှာလို့ ရတယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်မှာ။ အားလုံး ၆ ယောက် အ၀ စားတာ ၁၀၀ ကုန် ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ အကုန်တောင် မပါဘူး။ အတော် လေးစားပြီးမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သတိရတယ်။ တစ်ပွဲချင်းလည်း မရိုက်နိုင်ဘူး၊ အမြန်ရိုက်၊ စားဖို့ က အရေးကြီးနေတယ်။
Diandin Leluk Thai Restaurant Pte Ltd
Address : 5001 Beach Road, #01-67 (01-71) Golden Mile Complex, Singapore, 199588
ဒီဆိုင် သွားစားတိုင်း မှတ်တမ်း မတင်ဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတလေတော့ ဒီလိုတွေ မှတ်ထားဖြစ်ခဲ့တယ်...
Posted by Nay Nay Naing at 4/15/2009 02:08:00 PM5comments
မိရွှေသဲ - မေဆွိ
မိရွှေသဲ - သံသာဝင်း
Posted by Nay Nay Naing at 4/13/2009 01:51:00 PM 12 comments
The day it rained..
နောက်တစ်ပုံ ဆက်ရိုက်နိုင်ရင် ပိုကောင်းနိုင်ပေမယ့် ရထားရှေ့ တိုးလာတာကြည့်ပြီး လန့် သွားလို့ဆက်မရိုက် ဖြစ်လိုက်ဘူး။ ရထားလွတ်သွား မှာလည်း စိုးရိမ်တယ်။
ရထားစောင့်ရင်း ရှေ့ တည့်တည့်မှာ မြင်ရတာကို ရိုက်ထားတာပါ။ ဘယ်နေရာလဲ အပင်ပန်းခံ မှန်းနေမှာ စိုးရိမ်လို့ကြိုပြောလိုက်တယ်။ အားလုံးသိတဲ့ Clementi MRT မှာ ရိုက်ထားတာပါ။ ပုံတွေအားလုံး ဖုန်းထဲက ထွက်တဲ့အတိုင်း ဘောင်တပ်တာကလွဲရင် ဘာမှ မပြင်ထားဘူး။
အဲဒီနေ့ က မိုးတွေရွာနေတယ်..
Posted by Nay Nay Naing at 4/11/2009 05:38:00 PM 10 comments